“စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအနေနဲ့ ပြည်သူက… – PVTV Myanmar
“စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအနေနဲ့ ပြည်သူက ရှုမြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးအပေါ်မှာလည်း ပြည်သူက အော့နှလုံးနာနေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီ ဆိုတာ အားလုံးလည်း သိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်အောက်ခံ၊ သစ္စာခံအဖြစ်ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပူးပေါင်းကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်”
“ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဟာ စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်တပ်ပုံစံနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ စုစည်းကြရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါမှ ကျတော်တို့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်မတော်တစ်ခုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုမြို့နယ်အလိုက် ဖွဲ့စည်းကြတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ အဲ့ဒီမြို့နယ်ကလူတွေရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ကြားထဲမှာလည်း ဆက်သွယ်မှု ဆွေးနွေးမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင် ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေပါပြီ။ ဒီထဲက တကယ့် PDFရဲ့တပ်မတော်သားအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကတော့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲ့ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့တွေမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်၊ တပြိုင်တည်းမှာပဲ (အချို့က) PDF ရဲ့ ပြည်သူ့စစ်သဘောတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မြို့နယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာရဲ့
အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထမ်းဆောင်ကြတာမျိုးလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Like – 9.7K Share – 1673
Maung Maung Myat Lwin says:
လက်ရှိ Youtube မှာရှိနေတဲ့ PVT Channel က official ဟုတ်ပါသလားဗျ subscribe လုပ်ထားချင်လို့ပါ။
အဖြူရောင် ကြယ် says:
2021-05-09 at 4:01 PM
နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင်(လ.ဝ.က ဥပဒေ)ကို မြန်မြန်ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဆိုပါက ရို အရေး ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆ
2021-05-09 at 4:16 PM
PDF , NUG တို့ ဆောင်ရွက်သမျှ အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပါစေ။
ဘဲဉ ဘဲဉ says:
2021-05-09 at 4:44 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးအဖွဲ များ စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည်စုံပါစေ နိုင်ငံတာဝန်ကိုများစွာထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ။
2021-05-09 at 5:10 PM
အစပိုင်းတုန်းက ဒေါက်တာဆာဆာကို ကလေးအတွေးနဲ့ စိတ်ကူးယည်နေတာပါလို့ စစ်ကောင်စီပြောခဲ့တာ အခုတော့ မအလ တစ်သိုက်ကို ကလေးလေးတွေက ငရဲပြည်ကိုပို့ပေးတော့မှာ မကြာတော့ဘူး👏👏👏👍👍👍
2021-05-09 at 5:26 PM
Hi U Yee Mon
Very good message about PDF . Nowadays, advanced technology and weapons are also very important to succeed the terrorists without harming the public . Need to acquire better technological weapons and training for PDF forces in addition to basic core military training . It should be well equipped, high tech educated PDF soldiers unlike those from other side.
2021-05-09 at 6:14 PM
အင်အားက ငါးရ‌ာကျော်လောက်ပဲရှိတာလား တပ်ရင်းတစ်ရင်းစာပဲရ‌ှိတယ်
2021-05-09 at 6:41 PM
သတိပြုစေချင်ပါတယ် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ (ခ) စစ်အာဏရှင် လက်အောက်ခံ စစ်ခွေး ၊ ရဲခွေး တွင် မက အခြာအဖွဲအစည်းတွေရှိ့ပါတယ်။
ထိုအဖွဲအစည်းများက PDF ပုံစံတူ ဖန်တီးပြီ Online ပေါ်မှာ စာတွေတင်မယ် ၊ ဖောက်ခွဲမူတွေ ကို ဖန်တီနိုင်ပါတယ်။
( အကြမ်းဖက် စစ်အာဏရှင်က ပြောထားပါတယ် သူတိုမလုပ်ရဲတာ ဘာမှ မရှိ့ဘူးဆိုတာ NUG , CRPH , PDF အဖွဲ့များအာလုံး မမေ့ပါနဲ့ )
အဓိက အနေနဲ့က NUG defence အနေနဲ့ အတည်ပြုထားတဲ့ တိုင်ဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အလိုက် PDF အဖွဲ့တွေကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို ချပြစေခြင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ( ဇီသီးတွေကို ဇကော်နဲ့ လှိန်ထားသလို ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု နဲ့ တိုင်ရင်းသားပြည်သူတွေက ဘယ်သူကို ယုံလို့ ယုံရမှန် မသိ ဖြစ်သွားမှာ ဆိုလို့ပါ )
CRPH , NUG defence အနေနဲ့ PDF အဖွဲ့များကို ( Online ပေါ်ကစာနဲ့ပဲမဟုတ်ဘဲ ) သေသေချာချာ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် တိုင်ဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် စနစ်တစ်ကျ ဖွဲစည်းပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို ချပြပြီး စစ်ရေးရည်မှန်တွေ လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖော်စေချင်ပါတယ် အပြုသဘော ဆောင်သောအမြင်ဖြင့် အကြံပြုချင်ပါတယ်။
2021-05-09 at 7:04 PM
စစ်သားတွေသာ ကျောင်းသားတွေလို ပြည်သူ့အတွက် ညီညီ ညွတ်ညွတ် CDM လုပ် တော်လှန်ကြရင် စစ်ကောင်စီလည်းကြွ တိုင်းပြည်အနာဂတ်လည်း လှပြီပဲ
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက သူတို့ရဲ့ အာဏာ နှင့် အကျိုးစီးပွားအတွက် ခင်ဗျားတို့ကို သတင်းအမှောင်ချပြီး ဝါဒဖြန့် အမိန့်ပေး အသုံးချနေတာပါ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသက်တွေ ဘဝတွေကို အာဏာရှင်တွေအတွက် တန်ဖိုးမဲ့စွာ မပေးဆပ်ပါနဲ့
နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူအတွက်သာ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးဆပ်ပါ
တပ်တွင်းမှာ ခင်ဗျားတို့ တစ်ယောက်ချင်းစီ ထရင် တစ်ယောက်ချင်းစီကို ဖိလိမ့်မယ်
ပြိုင်တူထရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ကိုသိက္ခာ မဲ့အောင် လုပ်နေတဲ့ မအလ တို့အဖွဲ့အမြန် ကြွပြီ 😏
တပ်တွင်းမှာ ခင်ဗျားတို့မညီညွတ်သရွေ့ မအလက အင်အားကြီးတယ်
ညီညွတ်ရင် တကယ်အင်အားကြီးတာက သူမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျားတို့ပဲ
Thingyan Moe says:
2021-05-09 at 8:55 PM
2021-05-09 at 9:01 PM
Tun Tun Htay says:
2021-05-09 at 9:58 PM
ဦးရည်မွန် လွှတ်တော်မှာ ပြောသွားတာ အရမ်းတိကျကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီ video နားထောင်ရတာ လိုရင်းမရောက်နိုင်လို့ စိတ်ရှည်စွာ နားထောင်ရတယ်။
2021-05-10 at 6:50 AM
Kareng Hkawn Nu says:
2021-05-10 at 7:39 AM
ေလးစား ၊ အေလးထား အျပည့္ အဝ ေထာက္ခံ အားေပးၾကပါသည္။
ႀကံ့ခိုင္ က်န္းမာ ေဘးကင္း ေအာင္ ျမင္ၾကပါေစ…
PDF ၅၀၀ အင္အား သည္ မတရားေသာရန္သူ ၅ သိန္းထက္မကေသာ အင္အားကို ျပဳတ္ျပဳတ္ ျပဳန္းေအာင္ ၊အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ ရွင္းလင္းနိုင္မည့္ အင္အားျဖစ္ၾကသည္။
2021-05-10 at 8:22 AM
ေဆာင္းဦး ေနျခည္ says:
On Syi says:
ပြည်တွင်းမှာတင်အော့နှလုံးနာ တာမဟုတ်ပါ နိုင်ငံတကာရဲ့ စက်ဆုပ်မှု ကို ပါရရှိနေတာပါ
Ko Naing Win says:
2021-05-10 at 7:42 PM
Gam Mun says:
2021-05-11 at 10:59 AM
2021-05-11 at 2:00 PM
When you say you arealegitimate govt quelling an army rebellion withaprofessional army NOTarevolutionary govt leading an armed revolution witharevolutionary army, it begs the question:
ARE YOU IN OR ARE YOU OUT OF THE REVOLUTION?
• Sound PRINCIPLES. When do we see ACTION? It’s not like people aren’t continuing to die onadaily basis.
• When are the CIC, 2IC and so on going to be appointed?
• Glad to hear organisingalink up with local defence forces wisely formed without waiting for God knows how long.
• Militia certainly part of the picture, and PDF itself (not PDA) sounds likeamilitia.
• A federal constitution has already been in existence in draft form since 2008 accepted by all except the newcomer CRPH that keeps banging on about it but appears to have put it on the back burner after some discussions by all accounts and still talks about discussions before committing itself to one.
• Another stage ofafederal alliance throughadefence coordination council (DCC) also got up before formingafederal union army seems like dragging it out… for what.
Good luck and God speed I think.
ဝန်ကြီးမင်းတို့လည်းဘိုလိုမှညှပ်မပြောရရင်မပြီးတော့ဘူး၊ဗမာလိုပြောနေရတာအားရပုံမပေါ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ထားတာတွေထည့်ရမှလား၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်(ကျင့်ထုံးကျင့်စဥ်နဲ့အညီ)လည်းအင်စတီကျူးရှင်း(အဆောက်အအုံ)လိုဖြစ်နေပြီနော် ဗမာလိုရှိပုံမရဘူး ပျင်းလို့ဘာသာမပြန်တော့တာလားဖျင်းလို့လား ပျင်းဖျင်းကြီးဖြစ်နေတာလား လုပ်ကြပါဦးလူထုကြီးပါနားလည်အောင်လို့၊ဘိုလိုမတတ်သူအများစုကြီးကိုလူရာသွင်းဖို့အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါရစေ။
ကျမ္မာကြပါစေ ဘေးဘယာဝေးကွာကြပါစေ သမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်များလည်းစောင့်ရှောက်ကြပါစေ
မှန်ပါတယ်ဗျာ။ စစ်တပ်ဟာ ဒီမိုက​ရေစီကို ယုံကြည်လို့ မဟုတ်ပါ။ ဒီမိုက​ရေစီကို အကာအကွယ်ယူပြီး သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘယ်သူ​သေ​သေ င​တေမှာပြီး​ရောဆိုပြီး လုပ်​နေတဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းပါ။
Zaw Myo Zaw Min says:
2021-05-13 at 10:47 AM
2021-05-13 at 2:54 PM
Mg Mg Than says:
2021-05-14 at 2:00 PM
ဝ တပ္မေတာ္ kia knu aa အပါအဝင္ eao စစ္တပ္
nug သမတ ျကီးအမိန္႔ နာခံေသာ စစ္တပ္မ်ားျဖစ္
တပ္မေတာ္ကေတာ့ nug အစိုးရကို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားျပီ
ေဒါ ္စုနဲ႔သမတျကီး ဝကခ အားလုးံ ခိုးမူနဲ႔ လက္ပူး
ခုထိ ျမိဳ႕တျမိဳ႕ ရေအာင္မသိမ္းနိဳင္ေသာ